HTC U Ocean: Foto mbụ na nkọwa teknụzụ | Androidsis
Jenụwarị gara aga, HTC kwuru na ya enweghị atụmatụ ibido ya HTC 11, na ndị Fans ahụ kwesịrị idozi maka U Ultra. Agbanyeghị, ọ dị ka ụlọ ọrụ ahụ na-ezube ịmalite ngwaọrụ ọzọ dị elu n'afọ a, akpọrọ U "Ocean".
The HTC U Ocean nwere ike izizi a ọnwa na ekele nke ọma Evan Blass anyị nwere ike inwe a mma echiche banyere ya anya na oru nkọwa, nke na-arụtụ aka a adịchaghị mobile na ụfọdụ nke kacha mma ngwaike mmiri dị ugbu a.
1 Imewe HTC U Ocean
2 Nka na ụzụ nkọwa nke HTC U Ocean
Imewe HTC U Ocean
Site na foto nke Blass bipụtara na Twitter, anyị nwere ike ịhụ na igwe ọhụụ ọhụrụ dị ka U Ultra mana igwefoto azụ dị okirikiri kama square. Enwekwara eriri ọkụ abụọ nke ọkụ na ihe yiri ka ọ bụ otu ụdị mmiri mmiri ahụ na-acha agba.
N'aka nke ọzọ, na n'ihu, ihe mkpisiaka ihe mmetụta pụtara ìhè n'okpuru ihuenyo ahụ, yana akụkụ ya na okpokolo agba ya.
Nka na ụzụ nkọwa nke HTC U Ocean
The HTC U Ocean ga-egosi na a 5.5-anụ ọhịa Quad HD ngosi (2560 x 1440 pikselụ), onye nhazi ahụ Snapdragon 835 Qualcomm na 4GB Ram. N'otu aka ahụ, a ga-enwe ebe nchekwa dị n'ime nke 64GB / 128GB expandable site microSD.
Na usoro nke ese foto, HTC U Ocean ga-anya isi a Igwefoto azu azu 12 megapixel na ihe mmetụta Sony IMX362, mgbe n'ihu ga-enwe mkpebi nke 16 megapixels na ga-eji a IMX351 ihe mmetụta si kwa na Sony.
Dị ka akụkụ pụtara ìhè, rịba ama na HTC U Ocean ga-egosipụta a emetụ etiti nke ga - enye ndị ọrụ ikike ijikwa ọrụ dị iche iche nke ngwaọrụ site na mmegharị.
N'ikpeazụ, HTC U Ocean ga-etinye sistemụ arụmọrụ Android 7.1 Nougat na nhazi akwa Sense 9 site na HTC.
Ka ọ dị ugbu a, ọ nweghị ọnụahịa ọ ga-ekwe omume ma ọ bụ ụbọchị mwepụta nke HTC U Ocean mara, agbanyeghị na nchapu ndị a niile na-egosi na nke a ga-abụ ọkwa nke HTC maka 2017.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » HTC » HTC U Ocean: Foto izizi na nkọwapụta teknụzụ
Facebook na-emeghachi omume mgbe mmadụ gbusịrị igbu ọchụ dị ndụ